Gareth Barry oo noqday xiddiga labaad ee ugu safashada badan taariikhda Premier League – Gool FM
(Liverpool) 20 Dis 2016 – Xiddiga khadka dhexe ee kooxda Everton ayaa noqday laacibka labaad ee ugu safashada badan taariikhda horyaalka Premier League, kaddib markii uu ka soo muuqday kulankii dhowaan soo dhammaaday ee Merseyside derby.
Gareth Barry ayaa ciyaaray kulankii kooxdiisa Everton ay guuldarrada 1-0 kala kulantay naadiga ay ka wada dhisan magaalada Liverpool ee Reds, waxaana goolka madiga ah ee looga adkaatay kulanka, Everton waqtigii dhimashada ka dhaliyey Mane.
Ciyaaryahankan 35-sano jirka ah ayaa ka sare maray dhanka safashada laacibkii hore ee kooxda Chelsea Frank Lampard, kaasoo Premier League saftay 609 kulan, halka Barry uu haatan saftay kulankiisii 610-aad ee horyaalka Ingiriiska.
Xiddiga ugu safashada badan taariikhda horyaalka Premier League waa halyeygii hore ee kooxda Manchester United Ryan Giggs, kaasoo horyaalka Ingiriiska saftay 632 kulan.
Haddaba halkaan hoose ka eeg saddexda xiddig ee ugu safashada badan taariikhda Premier League iyo ciyaaryahan waliba inta kulan oo uu saftay:-